Prefabricated envelope panel-Prefabricated envelope panel-Nanjing BeiLiDa New Materials System Engineering Co., Ltd.
Halkan ayaad joogtaa: Hoyga>Product>Gudiga baqshadda prefabricated
Number Model: Gudiga baqshadda prefabricated
Iyada oo la horumarinaayo tikniyoolajiyada warshadaha casriga ah, guryo dhismooyinka waxaa lagu samayn karaa dufcado iyo jaangooyooyin sida soosaarka mashiinka. Ilaa iyo inta qaybaha dhismayaasha prefabricant-ka ah loo raro goobta dhismaha oo la isugu yimaado.
Dhismooyinka la sii daayay waxay bilaabeen inay kiciyaan dadka danaha bilowgii qarnigii 20-naad ugu dambayntiina runti waxay noqdeen 1960-yadii. Ingiriiska, Faransiiska, Midowga Soofiyeeti iyo dalal kale ayaa sameeyay isku daygii ugu horreeyay. Iyada oo ay ugu wacan tahay xawaaraha dhismaha degdega ah iyo qiimaha wax soo saarka ee hooseeya ee dhismayaasha prefabricated, si dhakhso leh ayaa loogu xayasiiyaa adduunka oo dhan.
Muuqashada dhismayaashii hore ee la soo saaray waxay ahayd mid adag oo labis ah. Xilli dambe, dadku waxay horumar ku sameeyeen qaabeynta, kordhinta dabacsanaanta iyo kala duwanaanta, si dhismayaasha prefab-loo-dhisan loogu dhisi karo oo keliya ma aha dufcado keliya, laakiin sidoo kale qaabab hodan ah.
I. Hawlaha iyo Faa'iidooyinka GRC Oo La Soo Dhex Galiyay Dhismeyaasha Difaaca ee Dibedda
Badeecadaha wareega ee GRC waxaa lagu kala duwanaan karaa qaab-dhismeedka, qaabka, midabka, maqaarka, iwm.
1. Qaab dhismeedka ilaalinta durugsan waxaa ka mid ah: derbiga bannaanka, saqafka, daaqada dhinaca, albaabka dibedda, iwm.
2. Qaabdhismeedka qaab dhismeedka durugsan waxaa loo adeegsadaa is dhexgalka qurxinta wajiga kore iyo xafidaada kuleylka si looga hortago dabaysha iyo roobka, isbedelka heerkulka, shucaaca qoraxda, iwm.
3. Shaqaynta: Waxay leedahay sifooyinka ilaalinta kuleylka, xakamaynta kuleylka, biyo-celinta, caddeynta qoyaanka, caabbinta dabka, cimri dhererka, is-nadiifinta, iwm.
4. Waxaa loo qaybin karaa qaab-dhismeedka keli-keli ah iyo qaab-dhismeedka weelka badan leh ee isku-dhafan.
5. Waxaa loo qaybin karaa nidaamka hal-lakabka iyo nidaamka qaab-dhismeedka lakabyo badan leh. Lakabka kore waa lakab ilaalin ah, dhexda waxay isticmaashaa sheyga ilaalinta kuleylka is-buufin, lakabka hoose waa lakabka dusha sare ee gudaha.
6. Lakab kastaa wuxuu u adeegsanayaa lafaha sidii qaab dhismeedka u taageersan yahay ama xoojinta lakabka difaaca gudaha sida qaab dhismeedka;
Hawlaha ugu waaweyn iyo faa'iidooyinka dhismayaasha la sameeyay ee GRC waa:
(1) Naqshadeynta Kala Duwan.
Waqtiga xaadirka ah, naqshadda degenaanshuhu waxay la jaanqaadi kartaa baahida guryaha, iyada oo darbooyin badan oo culeysku saaran yahay, bannaan yar, kala tagga dhintay, iyo qolka qolka aan si dabacsan loogu qeybin karin. Si kastaba ha noqotee, guryaha prefabricated loo qaybin karaa qolal yar yar oo holal ah ama qolal waaweyn oo hoolal yaryar ah iyadoo loo eegayo baahida dadka deggan. Mid ka mid ah dhibaatooyinka asaasiga ah ee qolalka waaweyn ee dabacsan ee dhismayaasha la deggan yahay waa inay lahaadaan darbooyin qeyb ah oo iftiin leh. GRC, GRG, GRP iyo agabyo kale oo cusub ayaa si sax ah u ah qalabka ugu fiican ee darbiyada bannaanka, darbiyada qaybinta, saqafyada la hakiyey iyo qurxinta gidaarka gudaha.
(2) Casriyeynta Functional
Dhismaha PC-GRC ee la been abuuray waxay leeyihiin howlaha soo socda:
1. Ilaalinta deegaanka iyo wasakheynta. Darbiga wuxuu leeyahay shaqooyinka is-nadiifinta iyo nadiifinta hawada.
2. Darbiga bannaanka ee badbaadinta tamarta wuxuu leeyahay lakab kuleyl celcelis ah heer kul ah si loo kordhiyo kuleylka xilliga qaboobaha loona yareeyo isticmaalka tamarta qaboojinta xilliga xagaaga;
3. Xakamaynta dhawaqyadu waxay wanaajisaa shaqada xiridda ee darbiyada iyo albaabbada iyo daaqadaha. Alaabada xayrta kuleylka waxay leeyihiin shaqo maqal, si ay u bixiyaan jawi deggan oo qolka ka fog kana fogaato faragalinta buuqa bannaanka.
4. Ka hortagga dabka iyo u ololka dabka si looga hortago fiditaanka ama fiditaanka dabka;
5. Hoos u dhigis ku timaada culeyska dhismaha iyo kordhinta isku xirnaanta la been abuuray;
6. Muuqaalka quruxda badan uma baahna raaxo, laakiin wajigu waa cad yahay oo waaqasan yahay, mana jabi doono, ma burburi doono ama ma xumaanayo ka dib isticmaalka muddada dheer.
7. Feejignaanta wanaagsan waxay bixisaa shuruudo ku habboon jikada iyo musqusha si loogu qalabeeyo tas-hiilaad fayadhowr oo kala duwan;
8. Kordhinta wanaagsan ee kordhinta suurtagalnimada abuurista qalab koronto oo cusub, qalabka isgaarsiinta, qalabka keydinta tamarta, iwm.
(3) warshad soo-saare
Aad ayey u adag tahay in bannaanka hore ee dhismayaasha soo jireenka ahi ay soo saaraan qaabab qurux badan oo kala duwan iyada oo ku xidhan dhismaha goobta, iyo rinjiga midabaynta rinjiga ahi ma muujin doono kala duwanaanta midabka mana socon doono muddo dheer. Si kastaba ha noqotee, GRC been abuur ka sameysan darbiyada gidaarada bannaanka ayaa si fudud u sameyn kara tan iyada oo loo marayo caaryada, buufin farsamada, nanotechnology, teknolojiyada dubitaanka microwave iyo teknolojiyad kale. Alaabada xaydha badan waxaa si buuxda u badalay qalab isku dhafan PC-GRC; Jaranjarooyinka saqafka, joodariga biraha khafiifka ah, alwaaxyada birta kala duwan iyo isku xirayaasha dhamaantood waa wax soosaar farsameysan oo leh cabbir sax ah. Dabaqyada saqafka dusha sare iyo saqafka sareba sidoo kale waxaa lagu meeleeyay warshadaha si ay ugu fududaato dhismaha. Alaabada gudaha ah sida alwaaxyada loo yaqaan 'gypsum board', qalabka wax lagu daboolo dabaqa, looxyada saqafka sare iyo wixii la mid ah ayaa kaliya lagu soo saari karaa khadadka wax soo saarka ee adag. Ka sokow, habka wax soo saarka ee warshadda, tusmooyinka waxqabadka ee agabyada sida xoogga, caabbinta dabka, caabbinta qabowga, caabbinta qoyaanka, xakamaynta codka iyo ilaalinta kuleylka ayaa la xakamayn karaa wakhti kasta.
Guriga waxaa loo arkaa inuu yahay qalab ballaaran, iyo agabyada casriga ah ee PC-GRC ee dhismaha ayaa ah qaybaha qalabkaan. Tayada qeybahan waxaa lagu dammaanad qaadi karaa wax soosaarka warshadeed ee adag, guriga la isugu yimidna wuxuu buuxin karaa shuruudaha shaqada.
(4) golaha dhismaha
Maaddaama ahmiyadda ay leedahay isku xirnaanshaha PC-GRC dhismayaasha la soo uruuriyay ayaa hoos loo dhigay marka la barbar dhigo kuwa dhismayaasha dhaqanka, aasaaska waa la fududaynayaa. Ka dib markii qaybaha dhismayaasha prefabricant loo diray warshadda, shaqaalaha goobta ayaa isu keenaya iyadoo la raacayo sawiradda. Hawlaha ballaaran ee qoyan sida dhoobada, plaster iyo dhismaha darbiga mar dambe kama muuqan doonaan goobta. Dhismaha kulanka PC-GRC wuxuu leeyahay faa'iidooyinka soo socda:
1. Horumar deg deg ah, waxaa lagu bixin karaa waqti gaaban;
2. Xoogsatada ayaa yaraaday, howlihii iskutallaab ahaana waa wax ku habboon oo nidaamsan;
3. Nidaam kasto oo shaqeynaya wuxuu hubin karaa sax ahaanta sida qalabka rakibida si loo hubiyo tayada;
4. Goobta dhismaha waxay leedahay dhawaq yar, alaabo yar yar iyo qashin yar iyo dheecaan biyo wasakhaysan, kuwaas oo faa iido u leh ilaalinta deegaanka;
5. Qiimaha dhismaha ayaa la dhimay.
Dusha sare ee GRC Sommth